Iwe unoda kushandisa Night Shift pane yako Mac? Tinokuratidza sei | IPhone nhau
Iwe unoda kushandisa Night Shift muIOS 9.3 pane yako Mac? Tinokuratidza sei
Imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye ane nharo matsva, yechipiri nekuti inenge isingawanikwe kune asiri-64-bit zvishandiso, izvo zvinosvika neIOS 9.3 ndizvo zvakadaidzwa naApple. Night Shift. Iyi "shanduko yeusiku" inoshandura mavara eiyo skrini ye iPhone yedu, iPod Kubata kana iPad kuitira kuti pasave nebhuruu shoma, kuitira kuti muviri wedu unzwisise kuti hwatova husiku uye nekudaro unoremekedza imwe yemitunhu yedu yekutenderera, ichitibvumira kurara zvirinani . Asi tinogona kuva nebasa rakafanana pane yedu Mac? Mhinduro ndeyokuti hongu, uye software inodikanwa yakafanana neayo asiri-64-bit iOS zvishandiso zvinoshandisa, sekureba sekunge ivo vakaputsika.
Kana iwe usingazive zvandiri kutaura nezvazvo, ndezve f.lux. Kunyangwe izvo zvinotaurwa naApple pane peji reShift Shift ichokwadi uye vazhinji vedu takadzidza nezve izvi nekuda kwebasas yeIOS 9.3, zvingangoita kuti kambani iyo Tim Cook inomhanya yave yakavakirwa pane f.lux application yekugadzira yako wega system. Iko kushanda muIOS kwakangofanana, nemusiyano wekuti Apple yawedzera yayo Night Shift muzvirongwa zvine dhizaini yakawanda zvinoenderana nekambani, asi ese ari maviri anochinja mavara eiyo skrini otomatiki zvichienderana nekuti panosviba munzvimbo. .
1 Maitiro ekuve nehusiku Shift muOS X
2 Mashandisiro aungaita f.lux
Maitiro ekuve nehusiku Shift muOS X
Izvo hazvigone kuve nyore, asi isu tinozvinyora nhanho nhanho:
Isu tinovhura Safari toenda kune iyo peji justgetflux.com.
Tinobaya Dhawunirodha f.lux.
Tinoenda kuDownloads folda uye tinya kaviri pafaira Flux.zip kuisunungura.
Iye zvino isu tinongofanirwa kudhonza iyo Flux faira ku Zvikumbiro folda kuiisa.
Mashandisiro aungaita f.lux
Kushandisa f.lux zvakare kuri nyore kwazvo. Muchokwadi, ukangoivhura, yatogadzirirwa kuti ishande, asi isu tinogona kugara tichigadzirisa mamwe maitiro maererano nezvatinoda.
Zvichida zvinonyanya kufadza ndizvo zvinoratidzwa neNhamba 1: tanga flux nekombuta. Rudzi urwu rwekushandisa rwakagadzirirwa kushandiswa isu tisingazvione, saka ini ndakamaka.
Saka iyo f.lux inoziva kana kwasviba munzvimbo medu, inoitarisa ichishandisa Indaneti. Naizvozvo, muchikamu chakaratidzirwa neNhamba 2, yedu GPS inobatanidza. Kana zvikasaoneka nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, isu tinongofanirwa kubata chiratidzo chekambasi kana kutsvaga nzvimbo yedu.
Tinogona zvakare kukuudza kuti inguvai yatinomuka, asi izvi zvinongogadzirisa dhizaini iyo inotitaurira kuti mavara achave sei pachiratidziro masikati. Ndarisiya ipapo sezvaraive.
Tine matatu matatu: Masikati, Zuva rovira, uye Nguva yekurara. Aya ma tabo akangodaro kuti tikwanise ona vara raachachinjira kwariri panguva iyoyo. Iko kubatwa kuri pamusoro hakutore mavara, asi kunofanirwa kuve kune orenji muvara. Kana risiri iro vara ratinoda, tinogona kugadzirisa iwo maitiro kungave nekufambisa inotsvedza kana nekuratidzira menyu Yakakurudzirwa mavara uye kusarudza pre-yakagadzirirwa toni.
Uye chinhu chakanaka nezve f.lux ndechekuti inowanikwawo paWindows neLinux. Saka ikozvino hatina chikonzero chekuremekedza ino circadian kutenderera. Na f.lux neNight Shift tinotanga kurara zvirinani. Unofungei?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Iwe unoda kushandisa Night Shift muIOS 9.3 pane yako Mac? Tinokuratidza sei
Zvino vanoti iyo google inounza maficha ku android kubva kuIos hahaha kana iri apple inovaunza kune ios kubva kuApple, chinhu chinonyanya kunakidza ndechekuti ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa maratidziro muiyo ios 9.3 uye chimwe chinhu chekare kwatiri mu android .
Hapana vhezheni ye Android ine izvi nekumisikidza, f.lux zvakadaro ine chishandiso cheWindows, Android, OS X uye kusvika munguva ichangopfuura iOS, kana Apple yakateedzera mumwe munhu panguva ino yanga iri f.lux, kwete Google, uye f.lux iri Open Source.
Mahwendefa eSamsung anounza nekutadza semhando yekuverenga. Cyanogenmod inounza iyo, ndiko kuti, mafoni ese anotengeswa ne cyanogenmod anayo nekutadza. Mushure memarefu maapuro akaisanganisa muiyo ios 9.3 uye ivo havateedzere kune android hahahaha. Ivo vakaita semuswe wembwa hahaha anogara kumashure.
Uye sekuziva kwangu, maitiro ekuverenga anowanikwa muSamsung kubva kune renyeredzi s4 (2013).
Mhoro, Eximorph. Kubva pane zvandakave ndichikwanisa kuona, haina kana basa nazvo. Haisi iyo inoshandura mavara kuti tigone kuverenga zviri nani, ndeyekuti inoshandura mavara kuratidza kumuviri kuti husiku. Ndozvazviri nezve "circadian" kutenderera iri nezve.
Mubvunzo ndowe unotevera: kana tikatarisa pachiratidziri chine mavara ebhuruu (zvakajairika), muviri unonzwisisa kuti masikati kana kunyangwe iri 23pm. Muviri haugadzirire husiku uyezve zvinobva zvatiomera kurara. Kana iyo skrini ichichinja aya mavara, hainyengere muviri, asi kuti i "zive" kuti husiku, inogadzirira kurara uye tobva tarara zvirinani.
Iyo yekuverenga modhi yaunotaura, ndanga ndichiishandisa muSafari kubva pandinoishandisa, zvese muIOS uye OS X.
chinhu chimwe chete icho cyanogenmod chinoita. Iyo inoshandiswa kurara zvirinani kana kuverenga zvirinani mukati mehusiku uye nehusiku, ichiri pfungwa imwechete uye apple rinoramba richikurudzirwa nezvose zvine android.
Izvo hazvina chekuita nazvo, ndinodzokorora. Zvamunotaura ndezvekuti iyo skrini inoshanduka kuti ione zviri nani zvinyorwa. Izvo f.lux (uye Night Shift) inoita kubvisa mavara ebhuruu kubva pachiratidziro kuitira kuti muviri uzive kuti husiku. Ndakati zvisizvo, asi kuti unzwisise, kana iwo mavara akasachinja, husiku isu tine Jet Lag shoma. Izvo zvinoitirwa neshanduko idzi ndezvekuti muviri unoziva kuti uri kuitwa husiku. Kana iwe ukatarisa chakajairwa skrini, yemuviri husiku inotanga iyo nguva yaunomira kutarisa. Pachinhu chidiki, zvinokutora iwe awa yakareba kuti ubate. Izvo hazvina chekuita nekuona iyo skrini uye zvinyorwa zviri nani.
Ini ndinogadzirisa kutaura kwangu: chinhu cheCyanogen ndiLiveDisplay. Sezvandakaverenga, zvakafanana. Vanoreurura kuti inobuda muf.lux uye yakasvika muna2015, kwete 2013. Chinhu cheSamsung ndicho muono weReader unogara uchishandiswa neApple. Chero zvazvingaitika, f.lux yakareba pamberi pese uye pamberi peiyo jailbroken iOS. Nekudaro, Apple "zvakare inovimba neparapaza," kwete Android.
Eximorph, Android uye kunyanya Samsung haina kugadzira chero chinhu muhupenyu. Google yakagadzira android zvichibva paunix, iyo yanga iriko kubvira makore makumi manomwe, uye samsung yakazvipira chete kutora akanakisa emhando dzese nekuaisa pamwechete muchigadzirwa chisina kushanda.
Pindura kuna Rafael
Iwe unenge wakavhiringidzika zvishoma. Iwe unongofanirwa kutarisa uye enzanisa windows nharembozha standard ne android kuti uone kufanana kwavakaita kune imwe kune imwe. Kudzokera kune zvandambotaura, hazvina basa kuti apuro inoshandisa chii, ipfungwa imwechete. Apple inoenderera ichikurudzirwa ne android.
Apple inofuridzirwa nejailbreak. 2009 https://justgetflux.com/news/2016/01/14/apple.html uye kubvira ipapo iri paIOS.
Maitiro ekuodha plug plug adapter kutsiva kubva kuApple
Apple "inogadzirisa" Siri dambudziko nekutsvaga nzvimbo dzekubvisa nhumbu